Tani waa isbahaysi caalami ah oo websites berrinka ku dhex yaal ee wax ku iibiya iyo kala iibsanayo ee ganacsi jira, la wareegid iyo hanti ganacsi. Waxaa si guul ah ay ka howl-239+ dalalka dunida oo dhan. Headquarteres ay ku yaalaan Switzerland.
Business Asset Exchange waa laan maxalliga ah ee Isbahaysiga Caalamiga ah ee dhufto ee online, kaas oo ku takhasusay iibinta hantida ganacsi ee 239+ dal oo dunida ah. Maal-muhiimka ah oo dhan portals kuwaas waa Dynamis Maalgashiga (fund maalgashiga Swiss).
Tallaabo cusub oo wax iibinta iyo soo iibsiga ee ganacsiga iyo ganacsi hantida ee hadda jira lagu sameeyey goobaha caanka ah labadaba la iibsadaha iyo iibiyaha iyo dilaaliinta ah iyo khubaro.
Business Asset Exchange waxay u taagan tahay isku halaynta Swiss, madaxbanaanida iyo sir ay ka buuxaan macluumaad iib degdeg ah oo waxtar iyo iibsiga hantida.
Mudan in wax laga Key iyo culumada
239+ dalalka dunida oo dhan:
bandhig xuduudaha isaga gudba ee xayaysiisyada deegaanka si ay dadka iibsanaya ee ka yimid dalalka kale waa suurto gal ah *;
Mayna waynaynin gaaladii sare by iibsada ee dibadda.
Buuxi database iibsadaha (Caalamka oo dhan)
helitaanka qaylodhaan liiska cusub midig ka dib markii ay xayeeysiin ah oo la xiriira waxaa ku qoran;
Booqashooyinka Goobaha (Caalamka oo dhan)
790,000+ bil kasta
Ku dhowaad dhammaan dadka iibsanaya ee Russia
Liisaska diiwaanka (caalamka oo dhan)
Ku qoran by milkiilayaasha ganacsiga
50 +% ka mid ah liiska ay leeyihiin xiriiro toos ah milkiilayaasha ganacsiga (ma wakiilada)
Liisaska waa la-to-date oo aan dhicin sababo la xiriira:
dhexdhexaad ah bulshada ay naftooda users;
jeeg maamulka goobta rigoore.
Keydinta haboon iyo waqti
In ka badan 100+ filters kala duwan ee xulashada fudud iyo kala soocida liiska waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee user kasta.
The profiles xayaysiinta ugu faahfaahsan (150+ fursadaha).
Qaylodhaan listing Cusub
Customization Easy of qaylodhaan for liiska dhigi lahaa baahiyaha gaarka ah ee iibsadaha
Brokers iyo khabiiro
Brokers iyo khubaro (caalamka oo dhan)
600+ profiles faahfaahsan ee barbaariyayaasha iyo khubaro caalamka oo dhan
muuqaalada ku jira dib u eegista madax banaan iyo qiimayn ah macaamiisha;
buuga ka mid ah dilaaliinta, lawers, Anchor iyo xirfadlayaal kale oo laga yaabaa in mid loo baahan yahay.
Views Profile (Caalamka oo dhan)
24,000+ bil kasta
Xulashada Smart oo khaas ah
Nidaamka listing gooni ah codsi u dhexdhexaad ah oo ah khabiir xulashada, suuragelinayo in xirfadlayaasha looga baahan yahay inay is-jawaab u ahayd codsiyada ee macaamiisha.
mar la taaban karo iyo dadaal badbaadiyo macaamiisha iyo xirfadlayaasha
Codsiyada xulashada xirfadeed (caalamka oo dhan)
1,000+ codsiyada bil kasta
6,000+ jawaabaha xirfadley ah bil kasta
Alerts codsiga xulashada professional
Alert Auto ah ee barbaariyayaasha iyo khubaro ku saabsan codsiyada cusub oo la xiriira awood u siisaa xirfadlayaasha ah in ay soo gudbiyaan waxa la soo jeediyey ay si hagar la'aan ah.
Add profile in buuga
Calculator ku qiimayso Business
Qiimaysay oo online Free by benchmarking ka dhan ah qiimaha hadda weydiisatay goboleed la siiyo ganacsiyada la mid ah
Howl-galkan ayaa ka qaybgalayaasha isbahaysi caalami ah waa:
si uu u hoggaamiyo iibinta iyo soo iibsiga ah ayaa Ganacsi, la wareegid iyo hantida ganacsi ee Russia si heer caalami ah, kuwaas oo bixiya fursado cusub oo ay ganacsatadu ay hubiyaan in heshiisyadan degdeg ah u taraan
Bixi raaxada ugu badnaan ka shaqeynayaan of portal la damaanad qaaday tayo sare leh oo ilaa-to-date macluumaad iyo user-friendly interface
Si joogto ah u horumariyaan madal, kordhin qaababka ay si kor loogu qaado tayada shaqo ee samaynta macaamil xawaalad
Business Asset Exchange waa in hab ballaaran oo wax ku ool ah iibsashada iyo iibinta ganacsiga iyo ganacsi hantida jira!